LSSI-CE chọrọ ka anyị niile nwere blọọgụ ma ọ bụ weebụsaịtị wee dọọ onye ọrụ nke ịdị adị nke kuki aka, gwa ha maka ya ma chọọ ikike ibudata ha.
Isiokwu 22.2 nke Iwu 34 / 2002. “Ndi n’enye oru nwere ike iji ebe nchekwa data na ihe weghachite na ngwa ihe ndi nnata ma oburu na ha enyela nkwenye ha mgbe emechara ha ihe niile doro anya na iji ha, ọ kachasị, na ebumnuche nke nhazi data, na ntinye nke Organic Iwu 15 / 1999, nke December 13, na Nchedo nke Nsonye Nkeonwe ”.
Dịka onye na-ahụ maka weebụsaịtị a, agbalịrị m ịgbaso ịgbaso oke mgbagha na edemede 22.2 nke Iwu 34/2002 na Ọrụ nke Ozi Ozi na Azụmaahịa Elektrọnikị gbasara kuki, agbanyeghị, na-eburu n'uche ụzọ nke Intanet na ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ, ọ gaghị adị mfe mgbe niile ịnweta ozi emelitere na kuki ndị ọzọ nwere ike iji site na weebụsaịtị a.
Nke a na-emetụta ọnọdụ maka ebe ibe weebụ a nwere ihe ndị agbakwunyere: ya bụ, ederede, akwụkwọ, ihe onyonyo ma ọ bụ ihe nkiri dị mkpụmkpụ echekwara echekwa ebe ọzọ, mana egosiri na weebụsaịtị anyị.
Yabụ, ọ bụrụ na ị hụ ụdị kuki a na webụsaịtị a ma edeghị ha na listi ndị a, biko gwa m. Nwekwara ike ịkpọtụrụ ndị ọzọ ozugbo ịrịọ ozi gbasara kuki ndị ị na-etinye, ebumnuche na ogologo oge nke kuki ahụ, yana otu esi ekwe nkwa nzuzo gị.
Kuki kuki nke webụsaịtị a
A na-eji kuki eme ihe na weebụsaịtị a nke ndi ozo Iji mee ka ị nweta ahụmịhe nchọgharị ka mma, ị nwere ike ịkekọrịta ọdịnaya na netwọkụ mmekọrịta, iji gosi gị mgbasa ozi dabere na mmasị gị na ịnweta ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ.
Dịka onye ọrụ, ị nwere ike jụ nhazi nke data ma ọ bụ ozi site na igbochi kuki ndị a site na nhazi kwesịrị ekwesị nke ihe nchọgharị gị. Agbanyeghị, ịmara na, ọ bụrụ na ịmee, saịtị a anaghị arụ ọrụ nke ọma.
N'okpuru usoro agbakwunye na Nkeji edemede 22.2 nke Iwu 34 / 2002 nke Ọrụ nke Informationlọ Ọrụ Ihe Ozi na Azụmaahịa Elektrik, ọ bụrụ na ị ga-aga n’ihu nyocha., ị ga-enye nkwenye gị maka ojiji nke kuki m kọwara n'ụzọ zuru ezu n'okpuru.
Ihe kuki a na weebụsaịtị a nyere aka:
Mee ka weebụsaịtị a rụọ ọrụ nke ọma
Chekwaa ka ịbanye n’ime oge ọ bụla ị gara saịtị a
Cheta ntọala gị n'oge nleta na n'etiti nleta
Kwe ka ị kirie vidiyo
Meziwanye ọsọ ọsọ / nchedo saịtị
Na ị nwere ike ịkekọrịta ibe peeji nke netwọkụ mmekọrịta
Nọgide na-eme ka weebụsaịtị a gaa n'ihu
Gosi gị mgbasa ozi dabere na usoro nchọgharị gị
Agaghị m eji kuki mee ihe a:
Na-anakọta ozi gbasara gị (n’onweghị nkwenye gị)
Anakọta ozi chebaara (n'enyeghị nkwupute nkwenye gị)
Kekọrịta ndị ọzọ gbasara data ndị ọzọ
Kuki ndị ọzọ anyị ji na webụsaịtị a yana nke ị ga-ama
Weebụsaịtị a, dịka ọtụtụ weebụsaịtị, tinyere atụmatụ nke ndị ọzọ nyere.
A na-anwalekwa atụmatụ ọhụrụ ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ maka nyocha na akụkọ. Nke a nwere ike gbanwee ntọala kuki site n'oge ruo n'oge ma kuki ahụ akọwapụtaghị na iwu a na-apụta. Ọ dị mkpa ka ị mara na ha bụ kuki na-adịru nwa oge na ọ gaghị ekwe omume mgbe niile ịkọ akụkọ yana na ha nwere naanị ebumnuche ọmụmụ na nyocha. Agaghị eji kuki ndị na-emebi nzuzo gị.
Cookiesfọdụ kuki kachasị akwụ ụgwọ nke atọ bụ:
Ndị sitere na ọrụ nyocha, akọwapụtara, Nchịkọta Google iji nyere aka wepụta ebe nrụọrụ weebụ nyocha maka ojiji nke ndị ọrụ nke weebụsaịtị ahụ wee melite ike ya, mana n'ọnọdụ ọ bụla, ha anaghị ejikọ ya na data nke nwere ike ịmata onye ọrụ ahụ.
Nchịkọta Google bụ ọrụ nyocha weebụ nke Google, Inc., ụlọ ọrụ Delaware nke isi ụlọ ọrụ ya dị na 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (California), CA 94043, United States ("Google").
Onye ọrụ ahụ nwere ike ịkpọ ụdị kuki ndị Google, Google Cookie na Google Maps na-eji, dị ka ndokwa dị na ibe ha banyere ụdị kuki ha na-eji.
Google Adwords nsuso: Anyị na-eji Google AdWords nsụgharị nsuso. Ntughari mgbanwe bụ ngwá ọrụ na-egosi ihe na-eme mgbe ma onye ahịa ọ pịa na mgbasa ozi gị, ma ha azụtara ngwaahịa ma ọ bụ debanye aha na akwụkwọ akụkọ gị. Kuki ndị a na-agwụ mgbe ụbọchị 30 gachara ma enweghị ozi nwere ike ịmata gị.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara nsuso Ntughari Google na iwu nzuzo.
Ntughari Google AdWords: Anyị na-eji Google AdWords Remarketing nke na-eji kuki iji nyere anyị aka wepụta mgbasa ozi ịntanetị ezubere iche dabere na nleta ndị gara aga na weebụsaịtị anyị. Google na-eji ozi a iji gosipụta mgbasa ozi na weebụsaịtị dị iche iche nke ndị ọzọ na Internetntanetị. Kuki ndị a na-aga ịnwụ ma ịnweghị ozi nwere ike ịmata gị nke ọma. Biko gaa na Nkwupụta Nzuzo Mgbasa Ozi Google maka ozi ndi ozo.
Mgbasa ozi nke AdWords mebere, dabere na ihe metụtara onye ọrụ ahụ, sitere na ozi anakọtara site na mmemme na ụzọ onye ọrụ na-eme na weebụsaịtị ndị ọzọ, iji ngwaọrụ, ngwa ma ọ bụ ngwanrọ metụtara ya. ngwaọrụ Google ndị ọzọ (DoubleClick Cookies).
DoubleClick na-eji kuki iji melite mgbasa ozi. A na-ejikarị kuki emebere mgbasa ozi dabere na ọdịnaya dịịrị onye ọrụ, melite mkpesa arụmọrụ ma zere igosi mgbasa ozi nke onye ọrụ ahụ ahụla.
DoubleClick na-eji ID kuki iji debe mgbasa ozi egosiri na ụfọdụ ihe nchọgharị. N'oge ibipụta mgbasa ozi na ihe nchọgharị, DoubleClick nwere ike iji ID kuki nke ihe nchọgharị ahụ wee lelee nke mgbasa ozi DoubleClick ahụlarị na ihe nchọgharị ahụ. Nke a bụ ka DoubleClick zere igosipụta mgbasa ozi nke onye ọrụ ahụla mbụ. N'otu aka ahụ, NJ kuki na-enye ohere DoubleClick ka ịdekọ mkparịta ụka metụtara arịrịọ mgbasa ozi, dịka mgbe onye ọrụ hụrụ mgbasa ozi DoubleClick, ma emesịa, na-eji otu ihe nchọgharị ahụ gaa na ebe nrụọrụ weebụ onye mgbasa ozi ma zụọ ihe. .
Kuki kuki DoubleClick enweghị ozi eji amata mmadụ. Oge ụfọdụ kuki ahụ nwere ihe nchọpụta ọzọ nke yiri ọdịdị nke kuki. A na-eji njirimara a amata mkpọsa mgbasa ozi nke onye ọrụ gosipụtara na mbụ.; Agbanyeghị, DoubleClick anaghị echekwa ụdị data ọ bụla na kuki ahụ, Ọzọkwa, a gaghị amata ozi ahụ n'onwe ya.
Dịka Onye Ntanetị atntanetị, n'oge ọ bụla ị ga - enwe ike ihichapụ ozi metụtara agwa gị na-eme nchọgharị, yana profaịlụ metụtara ya nke mepụtara omume ndị a kpọtụrụ aha, ịnweta ozugbo na akwụghị ụgwọ: https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=es . Ọ bụrụ na onye ọrụ emebie ọrụ a, kuki Nchọpụta DoubleClick pụrụ iche dị na ihe nchọgharị onye ọrụ ahụ nwere usoro “OPT_OUT”. Maka ID kuki pụrụ iche adịkwaghị, kuki ahụ nwere nkwarụ enweghị ike jikọtara ya na ihe nchọgharị ịchọrọ.
WordPress: es bụ onye ọrụ nke ntanetị WordPress na nnabata nnabata, nke ụlọ ọrụ North American nke Automattic, Inc. nwere. gbanwee ọrụ ya n'oge ọ bụla, ma tinye kuki ọhụrụ.
Kuki ndị a akọpụtaghị uru ọ bụla nye onye na-elekọta weebụsaịtị a. Automattic, Inc., na-ejikwa kuki ndị ọzọ iji nyere aka chọpụta ma soro ndị ọbịa na saịtị WordPress, mụta ojiji ha nwere weebụsaịtị Weebụ Automattic, yana nhọrọ ịnweta ha, dịka anakọtara na ngalaba "Kuki" nke gị iwu nzuzo.
A na-ejikwa nyiwe vidiyo dị ka YouTube
Mmemme Mgbakwunye Mmemme (Ha wụnye kuki nchọgharị iji soro ahịa nke malitere na weebụsaịtị a):
Kuki mmekọrịta ọha na eze: Enwere ike ịchekwa kuki sitere na netwọkụ mmekọrịta na ihe nchọgharị gị mgbe ị na-emegharị mkpụrụedemede maka instagram.com dịka ọmụmaatụ, mgbe ị jiri bọtịnụ ịkekọrịta ọdịnaya nke lyrics maka instagram.com na ụfọdụ netwọọdụ mmekọrịta.
Companieslọ ọrụ ndị na-emepụta kuki ndị a kwekọrọ na netwọkụ mmekọrịta nke saịtị a na-eji nwere amụma kuki nke ha:
Kuki njikọ Linkedin, dika enyere gị Iwu kuki
Kuki Facebook, dika enyere gi Cookies Policy
Ihe nzuzo ga-adabere na netwọkụ mmekọrịta ọ bụla ma dabere na ntọala nzuzo ị họrọla na netwọọ ndị a. Na agbanyeghị, ma onye na-elekọta weebụsaịtị a ma ọ bụ ndị na-akpọsa ngwa ahịa enweghị ike ịnweta ozi amata banyere onwe kuki ndị a.
N'okpuru, na dịka ihe ederede 22.2 nke LSSI chọrọ, kuki enwere ike ịwụnye mgbe niile mgbe ị na-eme nchọgharị na weebụsaịtị a ka akọwapụtara:
Aha OBIARA ECHICHE
Onwe: Sessionmtsnb_referrer mtsnb_seen_2923bp_ut_session__smToken__wps_cookie_1415814194694 _ga _gat Ha na-agwụ na njedebe nke nnọkọ. Ha na-echekwa ozi onye ọrụ na oge ha iji meziwanye ahụmịhe onye ọrụ.
NID __utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz Afọ 2 site na nhazi ma ọ bụ mmelite. Ha na-enye gị ohere iji websaịtị wee jiri ngwa Ntugharị Google, nke bụ ọrụ Google nyere iji nweta ozi gbasara ịnweta ndị ọrụ na weebụsaịtị. Offọdụ data echekwara maka nyocha ọzọ bụ: ọnụọgụ oge onye ọrụ ahụ gara na weebụsaịtị, ụbọchị nlele mbụ na nke ikpeazụ nke onye ọrụ ahụ, oge nleta, ibe nke onye ọrụ wee nweta na weebụsaịtị. , ihe nchọta onye ọrụ jirila wee rute webusaiti ma ọ bụ njikọ ị họrọ, tinye n’ime ụwa ebe onye ọrụ si abanye, wdg. Ihe nhazi nke kuki ndị a bu ụzọ site na ọrụ nke Google nyere, ọ bụ ya mere anyị ji atụ aro ka ị lelee ya Peeji nzuzo nke Google iji nweta ozi ndị ọzọ gbasara kuki ị na-eji na otu esi ewepụ ha (site na ịghọta na anyị abụghị maka ọdịnaya ma ọ bụ eziokwu nke weebụsaịtị ndị ọzọ)
.gumroad.com__ga Ná ngwụsị nke nnọkọ Ọ bụ ikpo okwu maka ire akwụkwọ dijitalụ.
Doubleclick.comDSIS-IDE-NJ Ụbọchị 30 A na-eji kuki a iji laghachi na ichiche, njikarịcha, ịkọ na ịkọwapụta mgbasa ozi n'ịntanetị. DoubleClick na-eziga kuki na ihe nchọgharị ahụ mgbe mbipụta ọ bụla, pịa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ na-ebute oku na sava DoubleClick. Ọ bụrụ na ihe nchọgharị ahụ na-anabata kuki ahụ, echekwara na ya. Ozi ndị ọzọ
NwetaClicky_jsuid Ụbọchị 30 A na-eji nchịkọta ọnụ ọgụgụ ọnụọgụ weebụ iji kpokọta ọnụ ọgụgụ ojiji weebụ. Ozi anakọtara gụnyere Internet Protocol (IP), ụdị ihe nchọgharị, onye na-eweta ọrụ (ntanetị (ISP), stampụ ụbọchị / oge, na-ezo aka / ntinye / ibe / iji nyochaa ọnọdụ, jikwaa saịtị ahụ, yana ngagharị nke onye ọrụ gburugburu saịtị. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na ibe Pịa okwu nzuzo .
ị tub Afọ 2 mgbe nhazi gasịrị Ọ na-enye anyị ohere itinye vidiyo YouTube. Ọnọdụ a nwere ike ịtọ kuki na kọmputa gị ozugbo ịpịrị ihe ọkpụkpọ vidiyo YouTube, mana YouTube agaghị echekwa ozi kuki eji amata onwe ya site na vidiyo vidiyo agbakwunyere site na iji ọnọdụ nzuzo ejirila. Maka ozi ndị ọzọ gaa na nnabata ozi YouTube
Acumbamail Afọ 2 mgbe nhazi gasịrị Ọ bụ igwe na-enye ndenye aha ozi ndị ọzọ
PYPF 1 ọnwa Kuki kuki Mee ka obi sie ike na ịnweta ịkwụ ụgwọ PayPal. Ha nwere ike jikọta ya na paypalobjects.com.
Etu esi ahazi ma gbanyụọ kuki ndị a
Ọ bụrụ na ịchọghị ka ebe nrụọrụ weebụ tinye cookies ọ bụla na draịvụ gị, ị nwere ike idozigharị ihe nchọgharị ka ewee mee ka ị mata gị tupu ebudata cookies ọ bụla. N'otu ụzọ ahụ, ịnwere ike imeghari nhazi ahụ ka ihe nchọgharị wee jụ kuki niile, ma ọ bụ naanị kuki ndị ọzọ. I nwekwara ike ihichapụ kuki ndị nke dị na kọmputa gị. Buru n’uche na ị gha emeghari nghazi nke ihe nchọgharị na akụrụngwa ọ bụla ị na-eji iche.
Ama (na) escape-room.online na-enye ndị ọrụ chọrọ igbochi ntinye nke kuki ndị a kpọtụrụ aha, njikọ enyere maka ebumnuche a site na ihe nchọgharị ndị a na-ewere na ojiji ha zuru ebe niile:
Iwu kuki emelitere ikpeazụ na 20/05/2020